🥇 Kaonty amin'ny lojika
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 420
Lahatsary momba ny kaonty amin'ny lojika
1. Ampitahao ny Configurations
2. Mifidiana vola
3. Kajy ny vidin'ny mpizara virtoaly
4. Raha ilaina, manafatra fanofana mpizara virtoaly
Mba hahafahan'ny mpiasanao rehetra miasa ao amin'ny angon-drakitra iray ihany, dia mila tambajotra eo an-toerana eo anelanelan'ny solosaina ianao (wired na Wi-Fi). Saingy azonao atao koa ny manafatra ny fametrahana ny programa ao amin'ny rahona raha:
Manana mpampiasa mihoatra ny iray ianao, saingy tsy misy tambajotra eo an-toerana eo anelanelan'ny solosaina.
Ny mpiasa sasany dia tsy maintsy miasa any an-trano.
Manana sampana maromaro ianao.
Te-hifehy ny orinasanao ianao na dia miala sasatra aza.
Ilaina ny miasa amin'ny programa amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro.
Mila mpizara matanjaka tsy misy fandaniana be ianao.
Kajy ny vidin'ny mpizara virtoaly
Indray mandeha ihany ianao no mandoa ny programa. Ary ny fandoavana ny rahona dia atao isam-bolana.
5. Manasonia fifanarahana
Alefaso ny antsipirian'ny fikambanana na ny pasipaoronao fotsiny mba hamaranana fifanarahana. Ny fifanarahana dia antoka ho anao fa hahazo izay ilainao ianao. fifanarahana
Ny fifanarahana nosoniavina dia mila alefa any aminay ho toy ny kopia scan na sary. Ny fifanarahana tany am-boalohany ihany no alefanay ho an'ireo izay mila dikan-taratasy.
6. Mandoa amin'ny karatra na fomba hafa
Ny karatrao dia mety amin'ny vola tsy ao anaty lisitra. Tsy olana izany. Azonao atao ny manao kajy ny vidin'ny programa amin'ny dolara amerikana ary mandoa amin'ny volan-drazanao amin'ny tahan'ny ankehitriny. Mba handoavana amin'ny karatra, ampiasao ny tranokala na fampiharana finday an'ny bankinao.
Manofa mpizara virtoaly. Vidiny
Rahoviana ianao no mila mpizara rahona?
Ny fanofana mpizara virtoaly dia misy ho an'ny mpividy ny Universal Accounting System ho safidy fanampiny, ary ho serivisy misaraka. Tsy miova ny vidiny. Afaka manafatra fanofana mpizara rahona ianao raha:
Raha mahay fitaovana ianao
Raha mahay fitaovana ianao, dia azonao atao ny misafidy ny fepetra takiana amin'ny fitaovana. Hokajiana avy hatrany ny vidin'ny fanofana mpizara virtoaly amin'ny fanamafisana voatondro.
Raha tsy mahalala na inona na inona momba ny hardware ianao
Raha tsy mahay teknika ianao dia eto ambany:
Ao amin'ny paragrafy laharana 1, manondro ny isan'ny olona hiasa ao amin'ny mpizara rahonao.
Manaova fanapahan-kevitra avy eo hoe inona no zava-dehibe aminao:
Raha zava-dehibe kokoa ny manofa ny mpizara rahona mora indrindra, dia aza manova zavatra hafa. Horohoho midina ity pejy ity, dia ho hitanao ny vidin'ny kajy amin'ny fanofana mpizara amin'ny rahona.
Raha tena takatry ny orinasanao ny vidiny, dia azonao atao ny manatsara ny fahombiazany. Amin'ny dingana #4, ovay ho ambony ny fahombiazan'ny mpizara.
1. Isan'ny mpampiasa
Lazao ny isan'ny olona hiasa amin'ny mpizara virtoaly.
Ny vaovao kokoa ny rafitra fandidiana, ny fitaovana matanjaka kokoa no ilaina amin'izany.
3. Toerana misy ny foibe data
Ao amin'ny tanàna samihafa dia misy mpizara amin'ny fahafaha-manao sy ny vidiny. Fidio izay mety aminao indrindra.
Russia, St. Petersburg, Server 1 Russia, St. Petersburg, Server 2 Rosia, Moskoa, Server 1 Rosia, Moskoa, Server 2 Rosia, Vladivostok Rosia, Novosibirsk Kazakhstan, Almaty, Server 1 Kazakhstan, Almaty, Server 2 Belarus, Minsk
4. Fahombiazan'ny mpizara
Safidio azafady ny fampisehoana ilaina amin'ny fitaovana. Miankina amin'ny safidinao, ny processeur sy ny RAM voafaritra dia ho hita.
Fampisehoana fototra Fahombiazana avo lenta
5. Unité centrale
Arakaraka ny mahery kokoa ny processeur amin'ny mpizara virtoaly, ny haingana kokoa ny programa hanao asa.
Isan'ny processeur cores: 1 pcs
6. Fahatsiarovana fidirana kisendrasendra
Arakaraka ny RAM ananan'ny mpizara iray ao amin'ny rahona no betsaka ny programa azonao atao. Ary koa ny mpampiasa bebe kokoa dia ho afaka hiasa tsara.
Fahatsiarovana fidirana kisendrasendra: 2 GB
7.1. Hafainganam-pandeha kapila
Raha miasa amin'ny mpizara rahona tsy misy hatak'andro, dia tsara kokoa ny misafidy kapila SSD haingam-pandeha. Ny logiciel dia mitahiry vaovao momba ny kapila mafy. Ny haingana kokoa ny fifanakalozana angona miaraka amin'ny kapila, ny haingana kokoa ny programa sy ny rafitra fandidiana mihitsy.
SSD haingana Kapila mahazatra SAS
7.2. Fahaizana kapila
Azonao atao ny mamaritra ny habetsaky ny fitehirizana kapila ho an'ny mpizara voatokana mba hahafahana mitahiry fampahalalana bebe kokoa.
Fahaizana kapila: 40 GB
8. Sakan'ny fantsona fifandraisana
Arakaraka ny midadasika ny fantsom-pifandraisana no haingan'ny sarin'ny mpizara rahona hiseho. Raha mamindra rakitra amin'ny mpizara rahona ianao na misintona rakitra avy amin'ny mpizara virtoaly, dia hisy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fifanakalozana vaovao miaraka amin'ny fampiantranoana ity parameter ity.
Ny tahan'ny famindrana angona: 10 Mbit/s
Vidiny fanofana mpizara virtoaly
Azafady, safidio ny vola izay mety aminao kokoa ny mikajy ny vidin'ny fanofana mpizara rahona. Ny vidiny dia hokajiana amin'ity vola ity, ary azo atao ny mandoa amin'ny ho avy amin'ny vola rehetra. Ohatra, ao amin'ilay manana karatra banky ianao.
Raha hanafatra fanofana mpizara rahona dia adika fotsiny ny lahatsoratra etsy ambany. Ary alefaso any aminay.
Manafatra kaonty amin'ny lojika
Tsy misy orinasa afaka miasa tsara raha tsy misy rafitra kaonty miorina amin'ny fomba mahomby amin'ny fifehezana ny fizotrany rehetra, ny asa tanterahina, ny fivezivezena sy ny vidin'ny trano fitehirizana. Toy ny fikambanana hafa rehetra, ny orinasam-pitaovana dia manana ny mombamomba azy manokana, izay ampifanarahan'ny programa USU-Soft tsy misy olana. Miaraka amin'ny fanampian'ity rindrambaiko ity, ny fitantanana kaonty amin'ny logistika dia hivadika ho fomba sarotra sy sarotra ho lasa fitaovana anaovana analytics feno, fanatsarana ary fanatsarana ny fizotran'ny fandaminana misy.
Logistics, ny kaonty izay mitaky fananganana data fanovana amin'ny fotoana tena izy, mila fanavaozana tsy tapaka ny vaovao sy ny fanarahana isaky ny dingana fampiharana ny filaminana. Ny rindranasa USU-Soft dia manome fanavaozana ny angon-drakitra ankehitriny noho ny fizarana ny lahatahiry fandaharana. Ity sakana ity dia misy fampahalalana voasokajy ho anaty lahatahiry: Mitahiry vola arakaraka vola; amin'ny fampiasana ny folder Clients, azonao atao ny manara-maso ny fiverenan'ny dokam-barotra sy ny fanaovana analytics ara-barotra; Ny fikambanana dia misy ny sampana rehetra sy ny lisitry ny mpiasan'ny orinasa; misy ihany koa ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fizotry ny asa sy ny sehatry ny asa, ny fenitry ny fanjifana solika, ny vidin'ny serivisy ataon'ireo mpitatitra antoko fahatelo. Ny fizarana Directories dia mamela anao hahatratra ny automatique ny fandalinana data sy ny karazan-kajikajy rehetra amin'ny kaontim-pitaovana, mandray anjara amin'ny maha-marina ny angon-drakitra sy ny fanafoanana ireo lesoka voajanaharin'ny asa fitantanana kaonty. Ny kaonty trano fitehirizam-bokatra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny logistika, ary ny fandaharanasa fanaraha-maso logistik dia manampy amin'ny fananganana asa fitehirizan-karena haingana sy ny famenoana ny trano fitehirizam-bokatra miaraka amin'ny ampahany amin'ny fiara fitaterana. Ny kaonty mangarahara koa dia manamora ny fitantanana sy ny rafitra fankatoavana ny antontan-taratasy, izay ampandrenesina ny tompon'andraikitra rehetra ny amin'ny fahatongavan'ireo taratasim-panompoana vaovao sy hanaraha-maso ny fotoana nanendrena azy. Noho izany, mihatsara ny fandaminana ny fomba anatiny ao amin'ny orinasa.
Ny programa momba ny kaonty momba ny serivisy lozisialy dia ahafahanao manangana asa mahomby amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitazonana ny tahiry ho an'ny mpanjifa, mamorona fangatahana fitaterana, fanaraha-maso ny zava-bita ary koa ny fifehezana ny fahazoana vola. Ny asan'ny mpitantana eo ambany fanaraha-mason'ny fitantanana akaiky dia manatsara kokoa ny serivisy fitaterana ary manome ny orinasa fifaninanana matanjaka. Ny kaontin'ny mpanjifa amin'ny logistics miaraka amin'ny alàlan'ny rafitra USU-Soft fanaraha-maso logistics dia mora kokoa ary haingana kokoa, raha mahazo fitaovana maro ianao amin'ny fiasana amin'ny angona CRM. Ny fizarana Reports dia ahafahanao misintona tatitra ara-bola sy fitantanana momba ny serivisy omena, ny vola lany, ny fanarenana ny vola, ny fifehezana ny lisitra ary ny tombom-barotra. Ny tatitra dia mety misy sary sy sary an-tsary ary azo atao mandritra ny fotoana rehetra. Ny kaonty amin'ny lozisialy dia manome fotoana maro isan-karazany amin'ny famakafakana feno momba ny orinasa, ao anatin'izany ny tontolon'ny fitaterana tsirairay. Ny tombony manokana amin'ny rindrambaiko dia ny fahaizana manara-maso tsy tapaka ny fizotry ny fikojakojana: ny fiara tsirairay ao anaty fiaramanidina dia samy manana ny toetrany sy ny daty fikojakojana nomaniny, izay ilana fampitandremana amin'ny alàlan'ny programa fitantanana lojika. Noho izany, ny programa momba ny kaonty lozisialy dia miantoka ny fikojakojana ara-potoana sy ny fanaraha-maso ny toetran'ny fiara, ary koa ny fisian'ny fitaovana mahomby amin'ny fanatanterahana ny baiko.
Ny rafitry ny kaonty amin'ny logistika dia fitaovana mahomby indrindra hampiharana ny drafitry ny orinasa sy hanatsarana ny fizotrany ary hifehezana ny kalitaon'ny serivisy. Ny rindrambaiko fitantanana kaonty lozisialy dia mametraka ny filaharana rehetra, ary tena ho faly amin'ny serivisinao ny mpanjifanao! Ny lamin'ny asa aman-draharaha dia manome anao ny sary feno momba ny fizotran'ny fizotrany: làlana iray amin'ny antsipirihany ho an'ny fitaterana tsirairay, fahavononan'ny fiara, teboka fandefasana sy famoahana entana, mpanafika voatendry, fikajiana ny zotra sy ny fandaniana rehetra ary koa ny fahazoana tapakila. avy amin'ny client. Ny programa fanaraha-maso ny lozisialy dia manome antoka ny fampandrosoana politika ara-bola mahefa noho ny famakafakana ny fandefasana vola mitohy ary ny fanombanana ny fahombiazan'ny fanapahan-kevitry ny fitantanana. Ny rindrambaiko miasa tokana an'ny departemanta sy fizarana rehetra dia ahafahanao mitazona andraikitra lehibe sy manamafy ny angon-drakitra miasa manerana ny orinasa.
Noho ny fahafaha-miovaova amin'ny rafitry ny rafitra, ny rindrambaiko dia mety amin'ny karazana fandaminana ary mifanaraka amin'ny mombamomba ny hetsika. Ny kaonty fitahirizam-bokin'ny USU-Soft dia manampy amin'ny famenoana ara-potoana ny tahiry sy ny fitahirizana entana amin'ny habetsany. Mahazo lisitr'ireo fampahalalana feno momba ny sampana fitaterana tsirairay ianao: isa, marika, tompona, fahaiza-mitondra; azo atao ihany koa ny mampakatra antontan-taratasy, ao anatin'izany ny pasipaoro teknika. Ny rindrambaiko dia mampatsiahy ny fotoana fanoloana antontan-taratasy ho an'ny fitaterana hanaraka ny lalàna napetraka. Ny fitahirizana kinova elektronika misy antontan-taratasy isan-karazany dia azo atao ihany koa amin'ny rafitra (fifanarahana, endrika filaminana, faktiora, karatra solika), ary koa ny famoahana azy ireo haingana. Azonao atao ny mandrafitra ireo fomba fikojakojana fikarakarana sy fanaraha-maso ny fampiharana azy ireo. Ny antsipiriany momba ny fitantanana kaonty sy ny fanombanana ny fandaminana ny asan'ny trano fanatobiana entana dia azo antoka fa manampy be.
Ny loko sy ny satan'ny fitambaran'ny fitaterana dia mampiseho mazava ny sarin'ny tahan'ny fiara manamboatra sy vonona hampiasaina. Ny fampidirana ny fampahalalana momba ny rafitra kaonty amin'ny tranokalan'ny orinasanao dia misy, raha ilaina izany. Manara-maso ny fiara tsirairay ianao: ny isan'ny fijanonana, ny toerana ary ny fotoana ijanonan'ny fijanonana, ny mileage isan'andro isan'andro, ary ny fampahafantarana haingana ny mpanjifa. Afaka mamorona tatitra momba ny asan'ny mpiasa tsirairay ianao ary manombatombana ny zava-bitany sy ny fahaizany mampiasa ora miasa.